Shaqaalaha isbitaalka magaalada Jowhar oo ku dhaqaaqay shaqo joojin – idalenews.com
Shaqaalaha isbitaalka magaalada Jowhar ee ay gacanta ku hayso hay’ada Intersos oo ah fadhigeedu yahay dalka Talyaaniga ayaa ku dhaqaaqay shaqo joojin aan waqti lahayn.
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in howlihii isbitaalka ay joogsadeen kadib markii shaqaalaha isbitaalka ay cabasho ka muujiyeen mushaarka oo ku yar awgii.
Mid kamid ah shaqaalaha isbitaalka ayaa waxa uu sheegay in hay’adda Intersos ay hore ugu ballanqaaday in ay u kordhin doonto mushaarka ay qaataan shaqaalaha sanadka 2013ka hase ahaatee aysan fulin ballanqaadkeeda.
“Mushaarka aan qaadano waxa uu yahay mid aad uga yar kan ay qaataan shaqaalaha kale ee ka shaqeeya isbitaalada dalka horena dhowr jeer ayaan uga codsanay in hay’addu kordhiso mushaarka aan qaadano”. ayuu yiri mid kamid ah kalkaaliyaasha ka howlgala isbitaalka Intersos ee magaalada Jowhar,
Shaqaalaha ku dhaqaaqay shaqo joojinta ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa illa iyo 65 ruux oo qeybaha kala duwan ee isbitaalka ka shaqeynayay. Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas’uuliyiinta isbitaalka.
Isbitaalka magaalada Jowhar ayaa waxaa haatan jiifa bukaan cuduro kala gedisan loogaga daweynayay, waxaana bukaankaas haatan soo wajahday dhibaato dhinaca gargaarka ay ka heli jireen isbitaalka magaalada Jowhar.
Ma aha markii ugu horeysey ee shaqaalaha isbitaalka magaalada Jowhar ay ku dhaqaaqeen shaqo joojin iyagoo hore shaqaalahan shaqo joojin noocan oo kale ah ugu dhaqaaqay iyagoo ka cabanaya mushaar yari.